03 / 06 / 2021 03 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 458 Views စာ0မှတ်ချက် 4711 ပျံသင်ခန်းစာ, ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, 75967 တားမြစ်ထားသောသစ်တော: Umbridge ၏ကြုံတွေ့ရ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ Hogwartပထမပျံသင်ခန်းစာ, Draco Malfoy, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hogwarts, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO.com, Madame Hooch, နဗီး Longbottom, ပါမောက္ခ Quirrell, reviews, အဆိုပါ LEGO Group, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား
အလွန်သေးငယ်သော classic Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံအတွက်ခေတ်မီ makeover ရရှိသွားတဲ့ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မော်ဒယ်သည်မှိုကျိုးပြီးသား
သင်၏စိတ်ကို ၂ ဝဝ ၂ သို့ပြန်ပို့ပါ - သင်လိုအပ်လျှင် Remembrall ကိုဆွဲထုတ်ပါ Lego ၂၃ လုံးပါသောအစုနှစ်ခုကိုပေါင် ၂.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချရန်အတွက် Group သည် ၀ မ်းသာသည်။ ၄ င်းမော်ဒယ်မှာ ၄၇၁၁ ပျံသင်ခန်းစာဖြစ်ပြီးအလွန်သေးငယ်သောအထုပ်ထဲတွင်လုပ်ဆောင်မှုများစွာပေးသောနိမ့်ကျသောအစုံဖြစ်သည်။
ဒါဟာလမ်းပါပဲartအဘို့အအမှတ် ing ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာဇွန်လ ၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်သောနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် classic မော်ဒယ် - ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်း dep မှာartတ ဦး တည်းကအရမ်းအဓိကလမ်းအတွက်သူတို့ထံမှ s ။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 အပိုင်းပိုင်း: 264 အသေးစားပုံများ: 4
Jadlam ကစားစရာများ: ယခုရရှိနိုင် Lego: ယခုရရှိနိုင်
ငါတို့ကဲ့သို့ပင်မင်းသည်ဒူးထောက်နေသော Hogw တွင်အများအပြားရှိနေပြီးဖြစ်သည်artဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံတစ်ခုတည်းကနေဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလည်းဆိုတာပါ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ တစ် ဦး dep ကိုကိုယ်စားပြုတယ်art20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လှိုင်း၏ကျန်ထံမှ ure ။
စဉ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဒီနှစ် Hogw အတွက် modular ပုံသေနည်းအသစ်ကိုတီထွင်ပါartwizard ၏ကျောင်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်၏လှပမှု၏လှပမှုနှင့်ပြည့်စုံသော၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ အစား၏ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းကိုပညာရှိနှင့်အတူသူ့ဟာသူ aligns ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်.
၎င်းသည် ၂၀၁၈-၂၀၂၀ စုံတွဲများနှင့်နီးကပ်စွာရွေ့လျားနိုင်စေရန် tan နှင့် nuggat အုတ်များပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့်သူတို့၏လက်ရှိစုဆောင်းမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်သောဝါရင့် Potter ပရိသတ်များအားချက်ချင်းဆွဲဆောင်သင့်သည်။ ဒါဟာအလားတူ p နှင့်အတူတစ် ဦး အကျွမ်းတဝင်တည်ဆောက်အတွေ့အကြုံကိုလည်းတွေ့ရမယ်art သူတို့အားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤ modular တည်ဆောက်ပုံကို ap ဆွဲထုတ်နိုင်သည်ဟူသောစိတ်ပြင်းပြမှုလည်းရှိသည်art နှင့်အလိုတော်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလည်းနှင့်အတူရုံဒဏ်ငွေ fit လိမ့်မယ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှင့်ကုမ္ပဏီ။
ကြောင်းအဆုံး, ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ နှစ် ဦး စလုံးအကြား, တစ် ဦး ချင်းစီကနေဒြပ်စင်များနှင့်အရောင်များကိုမျှဝေနှစ် ဦး စလုံးတစ်ဝက်အိမ်၏တစ်ခုခုအဖြစ်ထိုင်တော်မူ၏။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအလွယ်တကူထိခိုက်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ Hogw ကိုကောင်းမွန်စွာဖြည့်စွက်ရန်အတွက်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိသောအခန်းကဏ္offကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။artမည်သည့်ပုံစံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြသပါ။
ဒီနေရာမှာအခြေခံကျတဲ့နံရံတစ်ခုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားလဲဆိုရင် - စတစ်ကာခံအိမ်အလံကနေရင်ဘတ်ကက်ဘိနက်နဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ Quidditch ဂီယာသေတ္တာများ။
သေးငယ်သောရုပ်ပုံများကိုလေထဲသို့မြှင့်တင်ရာတွင်အသုံးပြုသော Trans-clear beams သည်ထူးခြားသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် dynamic display option များကိုထောက်ပံ့ရန် ၀ င်ရိုးတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ artအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းဖြင့်ကစားသောကလေးတွေသည်သေးငယ်သောရုပ်ပုံများကိုလက်ဖြင့်သာပျံသန်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အခြားအခင်းများတွင်ပြန်လည်နေရာချထားရန်အလားအလာရှိသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုထဲ၌သုံးခုကိုရယူခြင်းသည်အလျှံပယ်မဟုတ်ပါ။
ဒီအနည်းငယ် Hogw တစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်artကျောင်းမြေပြင်၌မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပုံဖော်ထားသည့်အစုများ၊ အခြေစိုက်စခန်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အနည်းငယ်စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်လည်းမလွယ်ကူပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီဟာဟာကျယ်ပြန့်တဲ့ Hogw သို့အသေးအဖွဲတိုးချဲ့မှုတစ်ခုပါartသင်တည်ဆောက်နေသည့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုပြသခြင်းသည်ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်ပါ။
သို့သော်ထိုစျေးနှုန်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါကအသေးစားပုံစံငယ်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ ရေတိုသည် ၎င်း၏ပုံမှန်ဇာတ်ကောင်သုံး ဦး စလုံးသည်မြင်ကွင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်artမူရင်း ၂၀၀၂ မော်ဒယ်ပုံစံအပေါ်အခြေခံထားခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အခြေခံသည်။ သို့သော်စုစုပေါင်းအသေးစားလေးခုသည်ဈေးသက်သာပြီးနှစ်မျိုးစလုံး၏ဘေးတွင်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 75967 တားမြစ်ထားသောသစ်တော: Umbridge ၏ကြုံတွေ့ရ.
ဒီ 2019 အစုံမှာထူးခြားတဲ့အသေးအဖွဲနှစ်ခုနှင့်အသစ် centauraur နှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး Madame Hooch ကတော့ 2018 ရဲ့ 5005254 မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ version ထက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ Minifigure Collection, Neville နှင့် Malfoy တို့သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအရာများမဟုတ်ပါ။ အီးxtra ကျောင်းသား (ကိစ္စရပ်များသည်ဟယ်ရီမဟုတ်သကဲ့သို့) အရာရာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်လိမ့်မည်။
Golden Quirrell သည်အထူးကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Group ၏ပထမဆုံးနှစ်ဖက်စလုံး ဦး ခေါင်း။ ပြီးတော့ဓားကိုင်ထားတဲ့ရုပ်ထုကနည်းပညာအရ minifigure p ကိုအသုံးပြုထားတယ်arts …
မူရင်း ၄၇၁၁ ပျံသင်ခန်းစာကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ပေါင် ၂.၉၉ နှင့်သာလျှင် ၉ ဆဈေးချိုသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ဒီနေရာမှာအသေးစားဂဏန်းနှစ်ဆနဲ့ ၁၁ ဆပိုများတဲ့အပိုင်းတွေရတယ်၊
တစ် ဦး က truer ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ'' တန်ဖိုးကဒီနွေရာသီရဲ့ကျန်အပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံများနှင့်ထိုမက်ထရစ်အားဖြင့်ကပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ် ... ကောင်းစွာ ... ။ £ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 ထက်ပိုပြီးတစ်ခုလုံး£ 10 / $ 10 / € 10 ဖြစ်ပါတယ် ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, အသေး minifigures ၏နံပါတ်နှင့်သာ 47 နည်းပါးလာအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ Collectible Wizard ၏ကဒ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ဒီနွေရာသီရဲ့အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုဖော်ပြမထားဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အကွာအဝေး, ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ ကျယ်ပြန့်သော Hogw နှင့်ချက်ချင်းလိုက်ဖက်သောတစ်ခုတည်းသောမော်ဒယ်အဖြစ်ထင်ရှားသည်artငါတို့ရှိသမျှသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ဆောက်နေခဲ့ display ကို။ ထိုအကြောင်းပြချက်အတွက်ပါမောက္ခ Quirrell - Madame Hooch၊ အကယ်၍ သင်သည်ရွှေအသေးအဖွဲများစုဆောင်းနေပါက၊ စျေးလျှော့လိုက်လျှင်ပင်၎င်းကိုကျော်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ မှတဆင့်သတ်မှတ် Jadlam ကစားစရာများ or LEGO.com ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO Harry Potter ၇၆၃၉၅ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာလား။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ စုဝေးရန် ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးထိုအချိန်အများစုသည်စတစ်ကာကင်းစင်စွာနှစ်သက်သည်။
LEGO Harry Potter 76395 Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်းarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာလား။
၂၆၄ ခုသာပါ ၀ င်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာအရာသည် 2018-2020 Hogw ကဲ့သို့တူညီသော tan နှင့် nougat အရောင်ကိုစွဲမြဲစေသည်arts စုံ။
LEGO Harry Potter 76389 76395 Hogw သည်မည်မျှကြီးမားသည်arts: ပထမပျံသင်ခန်းစာလား။
၎င်း၏ပုံမှန် configuration ကိုမှာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ အကျယ် ၂၀ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၁၅ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၆ မီတာရှိသည်။ ၎င်း၏ modular သဘောသဘာဝပေးထားသောသို့သော်ထိုရှုထောင့်တော်တော်လေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ကြသည်။
LEGO Harry Potter 76395 Hogw သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်းarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာကုန်ကျသလား။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: ပထမပျံသင်ခန်းစာ Jadlam Toys နှင့်ယခုတွင်ရနိုင်သည် LEGO.comယူကေတွင်ပေါင် ၂၇.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
← Lego Star Wars တရားဝင်ကက်တလောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနွေရာသီ 2021 အစုံ
Lego Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန် 2021 အတည်ပြုခဲ့သည် →